Chipo Chinongedzo cheApple Vashandisi | IPhone nhau
Luis Padilla | | IPhone zvishongedzo, Apple Watch
Kisimusi inguva yakakwana yekutora zvese izvo zvishandiso izvo zvawave uchitsvaga kwenguva yakareba asi izvo iwe hauna kumboshinga kutenga. Kunyora tsamba kune Vatatu Vakachenjera Varume kana Santa Claus kunogona kubatsira zvikuru panguva ino yegore kuitira kuti uwedzere yako muunganidzwa wemabhande eApple Watch yako, chigaro chekuchaja che iPhone yako nePadad kana chakakosha kesi ye iPhone yako. Heano mamwe mazano anogona kuve akakodzera kupa shamwari dzako kana mhuri, kana kunyangwe iwe pachako, uye kune zvakare mitengo yese.
1 Mhosva dze iPhone yako
2 Kubhadharisa mabhesheni
3 Tambo dzeApple Watch
Mhosva dze iPhone yako
Kudzivirirwa, dhizaini, hushoma hukobvu, kutakura makadhi echikwereti ... sarudzo dziripo kutenga kesi ye iPhone yedu isingaverengeke Zvatinoda ndizvo zvinotevera.
Spigen inogara yakafanana nehunhu pamutengo unopfuura unogamuchirwa. Iine mabutiro emarudzi ese, mamwe ndeechokwadi ekudzivirira bhomba, uye mamwe acho haanyatso kuoneka asi pasina kupa kupokana kwakanaka kumhirizhonga yekunze. Yangu yandinofarira kesi iri chaizvo iyo «Liquid Crystal» modhi. yakajeka chose, inochinjika uye ine dziviriro yakazara, kunyangwe yemakona. Iyo inokutendera kuti uratidze dhizaini uye ruvara rweyako iPhone usingaregi kudzivirirwa kubva mukukwaya nemadonhwe, uye ine mutengo unoyedza kwazvo, chete € 6,99 mukati Amazon. Inowanikwa kune akasiyana iPhone mamodheru uye mune akasiyana apedza.
RhinoShield ndechimwe chiratidzo chinovimbisa yakanyanya kudzivirirwa kune yako iPhone, uye cIyo ine mamwe emabumpers ayo pasina kutyora zvakawandisa dhizaini yeako smartphone inopa zvakanyanya kudzivirirwa kubva pakuwa, sezvatinokuratidza mune izvi chinyorwa. Aya ndiwo macomputer anongovhara chimiro cheiyo mudziyo, achifumura zvachose kumberi nekumashure kwayo, zvichikubvumidza kunakidzwa neruvara rwechigadzirwa Zvakare sezvavanomira panze hapazove nematambudziko ekuiisa pane chero nzvimbo pasina kukwenya yako Jet Nhema. Inowanikwa mumhando dzakasiyana siyana uye mavara mu Amazon kwe € 24,99 chete.
Ndichajaja base HiRise 2 ne Gumi nembiri yeSouth inochengetedza kuita kwakawanda kwemhando yepakutanga asi ichivandudza zvigadzirwa, ine akawanda akapetwa ekupedzisa ayo akafanana zvakanyanya neazvino iPhone mamodheru, uye izvo zvakare zvinotendera kuti ishandiswe neese maPad mamodheru kusvika 9,7 inches uye neyako Siri Remote. Inowanikwa mu Amazon kwe € 47,44. Takaita ongororo mukati ichi chinyorwa.
TimePorter inypical kuchaja dock yeApple Watch, kubvira Kwete chete iyo inobvumidza iwe kuti iite recharge bhatiri rayo asi iwe unogona zvakare kutakura iyo charger, kuchaja tambo uye mamwe matambo mukati. Yakanaka kutora nzendo, icho chakakwana chipo kune avo vane Apple wachi. Inowanikwa mu Amazon kwe € 54,99 nhema uye chena. Kana iwe uchida kuziva zvakawanda, kuongorora kwedu kuri ichi chinyorwa.
Iwe unongoda chigaro chekuchaja cheApple Watch yako, iyo yakachipa uye inoenderanawo neyemhando yehusiku? Ipapo chako chakakwana chipo ichi Spigen base, iyo inogovera nezvose zvishongedzo. Zvinoshanda, zvakapusa uye zvakachipa, unazvo zviripo Amazon kwe € 15,99.
Kune avo vane akati wandei michina kumba uye vasingazive kwekuisa kwavanobhadharisa usiku, Avantree inotipa mhinduro kwayo. Chiteshi chekuchaja chinoenderana nechero mudziyo, sezvo iwe ukaisa tambo, uye izvo mukuwedzera pakukwanisa kubhadharisa kusvika kumana panguva imwe chete. inobatsira iwe kuronga zvese kuitira kuti munzvimbo imwechete muve nezvose zvakaiswa zvakanaka. Mutengo wayo zvakare wakanaka kwazvo, chete € 34,99 mukati Amazon.
Tambo dzeApple Watch
Tambo dzeApple Watch dzakachena zvakaipa, uye kunyangwe Apple iine mamodheru akati wandei, mutengo wavo wakanyanya chaizvo. Kune akawanda mabhenji ayo anotengesa makopi emabhande epakutanga, asi MoKo ndeimwe yemakambani anopa kuvimba kwakanyanya nezvigadzirwa izvo, kunyangwe zvingave zvisingakwanise kusvika padanho rakaenzana rehunhu sepakutanga, zvinosangana neavhareji emazinga. uye zvakare nemutengo wakaderera zvikuru. Iyi ndiyo kesi yetambo yeMilanese iyo inowanikwa mumarudzi akasiyana siyana uye yemaviri masizi eApple Watch, inowanikwa mu Amazon kwe € 15,99 chete.
Kana iwe uchida zvemitambo mabhanhire saka haufanire kuenda kure zvakanyanya futi, nekuti yakafanana mhando MoKo inokupa yakatambanuka tambo dzesilicone mune ese mavara iwe aunogona kufungidzira, kunyange mamwe akatsikirirwa, uye nemaviri acho emawachi. Usarega kushandura tambo zuva rega kwe € 9,99 chete mukati Amazon.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » IPhone zvishongedzo » Chipo Chinongedzo cheApple Vashandisi
AirPods inopasa yekutanga kudonha bvunzo uye kushora kwemvura?